१३:०९, २० अगस्ट २०१५ जस्तै गरी पुनरावलोकन
No change in size , ६ वर्ष अघि
१६:२३, ८ मे २०१३ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने)
सा (स्वचालित हिज्जे सम्पादन, added deadend tag)
१३:०९, २० अगस्ट २०१५ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने) (रद्द गर्ने)
'''भीमबहादुर थापा''' निकै प्रशिद्ध नेपाली कलाकार, सैनिक कार्यक्रमका रेडिओ प्रस्तोता अनि दोस्रो बिश्वउद्ध लडेका वीर पनि हुन. तलका हरफहरू [http://www.kantipuronline.com/Nepal/arcarticle.php?&aid=5&isd=349 कान्तिपुर् अनलाइनअनलाईन] बाट जस्ताको तस्तै सारिएका हुन.
१३ वर्षको उमेरमा यिनी ब्रिटिस सेनामा भर्ना भएर दोस्रो महायुद्ध लडे। त्यतिखेर यिनी खोटाङको रावा, लामीडाँडामा गाईभैँसी चराउँदै लर्केजोवनसँग बरालिँदै थिए। एकदिन रभुवाको माघेसंक्रान्ति मेलामा गाउँले ठिटीहरूसँग नाचिरहेका बेला गोडामा छालाका बुटजुत्ता लगाएका, नाडीमा चम्किने घडी बाँधेका र शिरमा छत्रे टोपी लगाएका दुई जना युवकले उनलाई लाहुर जान फकाए। सुकोदामका लागि छटपटिनुपर्ने अवस्थामा महिनाको ३५ रूपियाँ भारु पाइने अवसर सामुन्नेमा उनैलाई खोज्दै उभिँदा किन नाइँ भन्ने ? उनी पनि डफ्फाहरू पछ्याउँदै देहरादुन छाउनी पुगे।
सन् १९४२ बाट '४४ बीचको महासमरमा उनले जुन दृश्य देखे र आफूलाई पनि ती दृश्यहरूमा जसरी एकाकार गराए, त्यसको स्मृतिले आज पनि उनका शरीरका रौँहरू ठाडा हुन्छन्। उनी मान्छे मार्न नै खटिएका थिए। त्यसैले खालि 'मार कि मर'को 'आदेश' पालन गर्नु दिनचर्या भएको थियो। उनलाई कुखुरा मार्नुभन्दा पनि सजिलो मान्छे मार्नु रहेछ जस्तो अनुभूति हुन्थ्यो। युद्धभूमिमा 'प|mन्टलाइनmन्टलाईन'मा उभिएर शत्रुहरूतर्फ बन्दुक सोझ्याउँदा उनलाई महाभारतको कुरुक्षेत्र सम्झना हुन्थ्यो। तर, त्यहाँ उनलाई गीता सुनाउने कृष्ण थिएनन्। आफ्नै बुद्धि, विवेक र आँटले शत्रुहरूको छातीमा बन्दुकका गोली बर्साउनुपथ्र्‍यो। मार्नुपथ्र्‍यो।
दाम त कमाए भीमबहादुर थापाले। तर, ००८ सालमा जब रेडियो नेपालबाट सैनिक कार्यक्रम चलाइदिनुपर्‍योचलाईदिनुपर्‍यो भन्ने बेहोराको पत्र आयो अनि उनको जीवनले नौलो कोल्टे फेर्‍यो। नामसँगै कमाउने क्रम पनि सुरू भयो। उनलाई 'शाही सैनिक कार्यक्रम'को जिम्मा लगाइयो। उनी नौ जनाको टोली बनाएर रेडियो छिरे र बन्दुक समाउने हातले ३७ वर्ष निरन्तर कलम चलाए। नाटक लेखे, लेखरचना लेखे र लेखे रूपक। उनको नाम उच्चारण हुनासाथ उनको परचिय स्वतः खुल्थ्यो, 'रूपक चलाउने सेनानी भीमबहादुर'। उनले रूपक लेखेनन् मात्र, प्रस्तुत गरे पनि। उनी रेडियो रूपकले यति लोकपि्रय बने, कालान्तरमा उनको परचिय नै यही बन्यो। र, उनी रेडियो रूपकका पर्याय हुनपुगे।
उनका जीवनमा अनेकौँ मोडहरू आए। मोडहरूसँगै सानातिना प्रतिकूलताहरू नथपिएका होइनन्। तर, भौतिक दुःख भन्ने उनले अनुभव गर्न पाएनन्। रेडियोदेखि सानो पर्दा र ठूलो पर्दाका अनगन्ती चलचित्रमा काम गरेर प्रसिद्धि र सम्मानको जीवन बिताए, बिताइरहेछन्। तर यात्रा, जीवनको उत्तरार्धमा छ। त्यसैले उनी अब परमार्थको चिन्तनमा छन्। बिहानै मठमन्दिरको चक्कर लगाउँछन्। उनलाई थाहा छ, जानेर कसैलाई दुःख दिएनन्। युद्ध भनेको मान्छे मार्नु नै हो। मारे। त्यो उनको कर्तर्व्य थियो। तर, त्यसो भनेर परमात्माले कहाँ मान्लान् र ? मारेको त हो नि ! त्यसैले उनी धर्मकर्ममा निष्ठाका साथ लागेको छन्। लर्केजोवनमा तरुनीसँग पनि जिस्िकए। "अहिले त म यस्तो छु, जवान हुँदा कस्तो थिएँ होला, अनुमान गर्नूस्," उनी ठट्यौलो शैलीमा भन्छन््, "केटीहरू मलाई देखेर हुरुक्क हुन्र्थे, भँगेरा चारोमा झुम्मिएझैँ झुम्मिन्थे।" त्यो उमेरमा, त्यो बैँसमा उनले पनि रमाइलो गरे। उनलाई त्यसको हिसाब पनि मिलाउनु छ। उनले त्यसको मोक्षप्राप्तिका लागि पनि बाटो बनाउनुपर्छ। अब उनले गर्न बाँकी काम खालि यत्ति हो। उनी यतिखेर परत्रको गन्तव्यमा पुग्न भक्तिधारामा डुबेर गोरेटो निर्माण गररिहेछन्।
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/487251" बाट अनुप्रेषित